IOS9ဒေါင်းလုပ်လင့်ခ် | အိုင်ဖုန်းသတင်း
Ignacio Sala | | iOS 9, iPhone ကို
နာရီအနည်းငယ်အကြာ Apple က iOS9နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် iTunes application အတွက် update ကိုလည်းဖြန့်ချိခဲ့ပြီး version 12.3 သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီးစက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်တွင်အများပြည်သူထံရောက်ရှိနိုင်မည့်နောက်ဆုံးပေါ် iOS နှင့် OS X El Capitan နှင့်သဟဇာတဖြစ်စေခဲ့သည်။
အကယ်၍ သင်သည် iOS9၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရလိုသောအသုံးပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီး iTunes မှနာရီပေါင်းများစွာဒေါင်းလုပ်လုပ်နေသည် (လူတိုင်းကစက်ကိုမြန်မြန်အဆင့်မြှင့်လိုသည်) သင်အောက်ပါတို့ကိုသုံးနိုင်သည် download လုပ်ရန်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော link များ iOS9၏နောက်ဆုံးဗားရှင်း (သင်၏ဆက်သွယ်မှုပေါ် မူတည်၍) မိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင် iTunes သို့ သွား၍ သင်၏ iPhone ကိုမြန်မြန်မွမ်းမံသည်။
1 IOS9သည် iPhone အတွက်လင့်များရယူပါ။
2 IOS9သည် iPad အတွက် Links များကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲသည်။
3 IOS9iPod အတွက်လင့်ခ်များကိုရယူပါ။
IOS9သည် iPhone အတွက်လင့်များရယူပါ။
iPhone ကို 5s (မော်ဒယ် A1453, A1533)
iPhone ကို 5s (မော်ဒယ် A1457, A1518, A1528, A1530)
iPhone ကို 5c (မော်ဒယ် A1456, A1532)
iPhone ကို 5c (မော်ဒယ် A1507, A1516, A1526, A1529)
iPhone ကို5(မော်ဒယ် A1428)
iPhone ကို5(မော်ဒယ် A1429)
IOS9သည် iPad အတွက် Links များကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲသည်။
အိုင်ပက် Air ကို2(မော်ဒယ် A1566)
အိုင်ပက် Air ကို2(မော်ဒယ် A1567)
iPad mini က3(မော်ဒယ် A1599)
iPad mini က3(မော်ဒယ် A1600)
iPad mini က3(မော်ဒယ် A1601)
အိုင်ပက် Air ကို (မော်ဒယ် A1474)
အိုင်ပက် Air ကို (မော်ဒယ် A1475)
အိုင်ပက် Air ကို (မော်ဒယ် A1476)
iPad mini က2(မော်ဒယ် A1489)
iPad mini က2(မော်ဒယ် A1490)
iPad mini က2(မော်ဒယ် A1491)
အိုင်ပက် (4th မျိုးဆက်မော်ဒယ် A1458)
အိုင်ပက် (4th မျိုးဆက်မော်ဒယ် A1459)
အိုင်ပက် (4th မျိုးဆက်မော်ဒယ် A1460)
အိုင်ပက်မီနီ (မော်ဒယ် A1432)
အိုင်ပက်မီနီ (မော်ဒယ် A1454)
အိုင်ပက်မီနီ (မော်ဒယ် A1455)
iPad Wi-Fi (၃ မျိုးဆက်)
iPad Wi-Fi + ဆယ်လူလာ (ATT)
iPad Wi-Fi + ဆယ်လူလာ (Verizon)
IOS9iPod အတွက်လင့်ခ်များကိုရယူပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iOS ကို » iOS9» IOS9download link များ
97 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
ဘယ်လိုဘက်ထရီနှင့်အပူဘယ်လိုသွားသလဲ ငါ GM ထွက်မလာမီကနောက်ဆုံး PUBLIC beta ကိုရရှိခဲ့ပြီး၎င်းကိုနှစ်နာရီအတွင်း download လုပ်၍ ကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ဖုန်းပွက်ပွက်ဆူနေသော !!
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီနောက်ဆုံးဗားရှင်းမှာဘယ်လိုပါ ၀ င်သလဲဆိုတာကျွန်တော့်ကိုပြောပြပါ
သင်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုပြောပြပါ။ ကျွန်ုပ် download လုပ်ပြီးပါပြီသို့သော်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုကျွန်တော်မသိပါ - c
သင်၏လင့်များအလွန်တန်ဖိုးထားကြသည်! သူတို့ဟာပြည့်နှက်နေတယ် ... xD အားလုံး iOS9ကိုရူးသွပ်နေတယ် ...
ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံတွင်နံနက် ၇း၀၀ နာရီမှညနေ ၃း၁၇ နာရီအထိဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်စွာရှိပြီးကျွန်ုပ်၏ ၆၆% ကျန်ရှိနေသည်။ ကျွန်ုပ်တည်နေရာနှင့် siri ကဲ့သို့အသုံးမပြုသောလုပ်ဆောင်မှုများကိုပိတ်ထားကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်နားမထောင်ပါ။ ဂီတဖြစ်စေ။ သာ Safari ခေါ်ဆိုမှုများနှင့်လူမှုကွန်ယက်များ
GM မှာကျွန်တော် 40mb အကြောင်း update လုပ်ခဲ့တယ်။ 🙂
ငါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ခုလုံးကိုလုပ်လိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာတော့အဲဒါကိုငါက update လုပ်ဖို့ပွတ်ဆွဲရမယ် 'လို့ပြောတယ်၊ မတုံ့ပြန်ဘူး၊ ငါအမှု၌အဘယ်သို့ပြုနိုင် ???
ငါ့ကိုအတူတူပါပဲဖြစ်ပျက် ... ကူညီ!
Natalia Triviño Ortiz ဟုသူကပြောသည်
Natalia Triviño Ortiz သို့ပြန်သွားပါ
အတူတူပါပဲငါ့ထံသို့ဖြစ်ပျက် !! သင်အဖြေတစ်ခုရှာခဲ့ပြီ ??????
Vania Ramirez ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးပြု၍ CCC ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Gabriela oliva ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပါ !!!!
Gabriela Oliva ကိုပြန်ပြောပါ
David Santiago Rosero Cuesta ဟုသူကပြောသည်
Apple logo ပေါ်လာသည်အထိတစ်ပြိုင်နက်အနည်းဆုံး ၁၀ စက္ကန့်အတွင်း Sleep / Wake နှင့် Home ခလုတ်များကို နှိပ်၍ ဖိထားပါ။
David Santiago Rosero Cuesta အားပြန်ပြောပါ
ငါနှင့်အတူတူပါပဲ "update to swipe" နှင့် mobile crash ။ ဒီအပ်ဒိတ်ကမိုဘိုင်းဖုန်းကိုအားသွင်းသည်။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
ငါဘာတွေဖြစ်နေသလဲသိလား "update လုပ်ဖို့ပွတ်ဆွဲရန်" မှမသွားဘူး
Jordi Drago Vila ဟုသူကပြောသည်
ဖုန်းကိုပြန်ဖွင့်ကြည့်ပါ။ ၁၀ စက္ကန့်လောက် power နဲ့ Home ခလုတ်ကိုတစ်ပြိုင်တည်းနှိပ်လိုက်ပါ။
Jordi Drago Vila ကိုပြန်ပြောပါ
Jose Prieto Garcia နေရာချထားပုံ ဟုသူကပြောသည်
ပြန်လည်စတင်ပါကပြproblemနာကိုဖြစ်စေသည်၊ ၎င်းသည်“ ဆော့ဖ်ဝဲအသစ်ပြောင်းရန်” တွင်စွဲမြဲစွဲနေသည်။
Jose Prieto Garcia သို့ပြန်သွားပါ
ငါနဲ့လည်းအတူတူပါပဲ၊ အဲဒါဟာ« slide to update »ပေါ်မှာပဲရှိနေပြီး၊ ၎င်းသည် iTunes နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ကြိုးစားသော်လည်း၎င်းကိုဆက်သွယ်မှုမပြုပါဘူး။
ငါသတိထားမိတာကပန်းသီးနှင့်တင်ဘားပေါ်ထွက်လာသောအခါ၎င်းသည်အနည်းငယ် တင်၍ အရာအားလုံးကိုမတင်ဘဲဆက်လက်ဖွင့်နေသည်
Nerea ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သင်၏သတင်းအချက်အလက်သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ အဲ့ဒါကကျွန်တော့်ကိုခေါင်းမူးစေတယ်။ မင်္ဂလာပါ။
Apple ကဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုပါပဲ။ ဒီ bug ကြောင့်ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူများသည် google "slide to upgrade" + iphone ...... ငါအဖြေကိုမမြင်ရ iPhone format ကိုအသာပုတ်ပါ
အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာထားရှိပြီးသင်၏ iTunes ကိုဖွင့်ပါ။ ထို့နောက်သင်၏အိုင်ဖုန်းကို ဆက်သွယ်၍ အိမ်၌ ၁၀ စက္ကန့်ထားရှိပါ။ ignition ကိုလွှတ်လိုက်ရုံဖြင့် home ခလုတ်ကိုနောက်ထပ် ၅ စက္ကန့်ခန့်ဆက်တိုက်နှိပ်ထားပါ။ သင်၏ဆဲလ်တွင်အရန်သင့်သိမ်းဆည်းထားခြင်းမရှိပါကအကုန်လုံးဆုံးရှုံးသွားမည်ဖြစ်သော်လည်း iPhone သည်ပြန်လည်အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်။
သူတို့ပြောသလိုပဲ၊ သင် ၈.၄.၁ မှလာလျှင်မအောင်မြင်ပါ ယခင်ဗားရှင်းတွင်နေပြီး၎င်းကိုမွမ်းမံလိုသောသူများအတွက်ထိုပျက်ကွက်မှုသည်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီအဆင့်တွေကိုလိုက်နာရမယ်။
နောက်ဆုံး၌၎င်းကိုပြင်ဆင်သည်။ သငျသညျ 8.4.1 မှအဆင့်လျှော့ချရန်ရှိသည်။ အောက်ကအဆင့်တွေကိုဖော်ပြထားတယ်။
လှမ်း 1 - သင့်ရဲ့ဓါတ်ပုံတွေကို backup လုပ်ထား! သင်သည်သင်၏ဖုန်းသို့မဆက်သွယ်နိုင်သော်လည်းသင်၏ဓာတ်ပုံများကိုအရန်ကူးယူထားသင့်သည်
အဆင့် ၂ - သင့် iPhone သို့မဟုတ် iPad အတွက် IOS2ကိုဤဆိုဒ်မှဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ https://ipsw.me/8.4.1
ကျွန်ုပ်ဖုန်းအတွက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ဖိုင်သည်အချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ဂူဂဲလ်မှဖိုင်အမည်ကိုရှာဖွေ။ Mega မှကူးယူခဲ့သည်။
အဆင့် ၃ - ဖုန်းကို DFU mode သို့ Reboot လုပ်ပါ။ ပါဝါခလုတ်နှင့် home ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး power ခလုတ်ကိုလွှတ်လိုက်လျှင် home ခလုတ်ကိုဖိထားပါ။
ဒီအချိန်မှာသင့်ရဲ့ဖုန်းကို iTunes နဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ပြောပါလိမ့်မယ်။ သင့်ဖုန်းကိုကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။
အဆင့် ၄ - Option (Mac) သို့မဟုတ် Shift (Windows) ကိုဖိထားပြီး Restore ကိုနှိပ်ပါ။
လှမ်း5- သင် download လုပ်ထားသော 8.4.1 ဖိုင်ကိုရှာဖွေပြီး၎င်းကိုရွေးပါ။ ၎င်းသည်ယခင် IOS ဗားရှင်းသို့ပြန်သွားသင့်သည်။ မွတ္စု: ၎င်းသည်ဖုန်းကိုရှင်းပစ်လိမ့်မည်။
အဆင့် ၆ - backup မှပြန်ယူပါ။ အဆင့်မြှင့်တင်ရန်မကြိုးစားမီသင်အရန်ကူးထားကြောင်းမျှော်လင့်ပါ။
UPDATE - ၈.၄.၁ ကို install လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာပြissuesနာမရှိတဲ့ IOS8.4.1 ကိုကျွန်တော် update လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ငါပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်ကြိုးစားသောအခါငါကန ဦး IOS9 ကို run ခဲ့သည်။ ဒီလူတိုင်းထွက်ကူညီပေးသည်မျှော်လင့်ပါတယ်။
အခြားမှတ်ချက်များပျောက်ကွယ်သွားပါသလား 20 ကျော်ရှိခဲ့သည် .... သူတို့က "swipe to update ကို" update ကို bug ကိုအကြောင်းပြောနေတာခဲ့ကြသည်
ထိုဖိုင်များကို iTunes မှမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။ ငါလုပ်ဖို့ရှိသည်
ငါဖြေရှင်းချက်ကိုရှာနေသည်၊ ငါကပုံပေါ်နေသည်၊ မွမ်းမံရန်ဆလိုက်သည်။ ထို့နောက်ဟယ်လိုကပြောကြားသည်၊ ကျွန်ုပ်၏ကွန်ယက်ကိုတောင်းသည်၊ ထိုပန်းသီးသည်ထပ်ပေါ်လာသည်။ - '
ငါအရာအားလုံးကို restore ချင်ကြဘူး !! .- ။ ' ငါအဖြေရှာနေတုန်းပဲ
Aaa helpaaaa ကျွန်ုပ်၏ Ipad သည်အသစ်ပြောင်းရန်လျှောကျနေသည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာပြန်လည်စတင်ပြီးဖြစ်သည်။
ပြီးတော့ငါမနက် ၉ နာရီလောက်ကတည်းကဖြစ်ခဲ့တာတောင်မှအဖြေမရသေးဘူး။ ငါမြင်တဲ့အရာအားလုံးကိုအရန်ကူးသိမ်းဆည်းပြီးပြန်ယူထားလို့ပါ
ဆိုဖီယာ sanchez ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်တော့်ကိုကူညီပါ၊ အဲဒါကအတူတူပါပဲ၊ ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး၊ အဲဒါကအတူတူပဲ
ဆိုဖီယာ Sanchez ကိုစာပြန်ပါ
ငါတို့ကိုကူညီနိုင်မယ့်သူတစ်ယောက်။ : '(
၈.၄.၁ မတိုင်မီ ios ရှိသူများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည် bug တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ဖတ်ရှုပြီးဖြစ်သည်။ ငါနဲ့ထပ်တူဖြစ်ခဲ့ရင်ငါဟာ ios 8.4.1 ကိုမလျှော့ချချင်ဘူး (ငါ့မှာ ၇.၁ ရှိခဲ့တယ်)
နှင့်သင်မည်သို့ nestor လုပ်ခဲ့တာလဲ
Johan သည်ဤစာမျက်နှာ၏အဆင့်များကိုလိုက်နာသည် http://computerhoy.com/paso-a-paso/software/como-volver-version-anterior-ios-forma-sencilla-14189 ကံကောင်းပါစေ
ငါ့ iPad ကဆလိုက်ထဲမှာနေတယ်။
တစ်စုံတစ် ဦး ကဖြေရှင်းချက်ကိုရှာတွေ့ပြီလား
ပြနာဖြေရှင်းခဲ့သည် !!! nestor ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ ios 8.4.1 ကိုအဆင့်လျှော့ချလိုက်တယ်၊ အဲဒါကငါ့အတွက်အလုပ်လုပ်တယ်၊ ငါ့ iphone ကိုပြန်ရှင်လာတယ်။
Deisy, ငါ့ iphone ကိုရှာပြီး deactivate လုပ်ဖို့မင်းဘာလုပ်ခဲ့လဲ။ အဲ့ဒီလိုမရှိရင်ငါအဲဒါကို restore လုပ်လို့မရဘူးလေ။
ယခင် ios 8.4.1 သို့ပြန်သွားရန်သေချာပါစေ
deisy ကျွန်ုပ်၏ iphone ကိုပိတ်ထားခြင်းမရှိဘဲပြန်ယူလို့မရဘူး၊ သင်မည်သို့ပြုလုပ်ခဲ့သနည်း။
ကျွန်ုပ်သည်“ iphone နေရာချထားပါ” ကိုပိတ်ထားလိုက်သောကြောင့်ပြproblemနာမရှိပါ။
Carlo အိုင်ဗင် Cortes ဟုသူကပြောသည်
ငါ့မှာ ipad air2wifi မော်ဒယ်လ်ရှိတယ်။ ဒီကိစ္စမှာဘယ် link ကို download လုပ်ရမလဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Carlo Ivan Cortes သို့ပြန်သွားပါ
အဲဒီမှာ ipad, model, ပြီးတော့သင် download လုပ်ချင်သော ios version ကိုရွေးပြီး၎င်းကိုသင်ရွေးပါ။
ငါကပြန်လည်ထူထောင်နေတယ် ... အဲဒါကငါ့ကိုထပ်မံအစေခံမယ်ဆိုရင်မင်းထင်သလား။
ယခင် iOS ကိုကျွန်ုပ်၏ iphone ထဲသို့မည်သို့သွင်းရမည်နည်း။ ငါပြောလိုက်တဲ့ဒဏ္legာရီတစ်ခုက ... မင်းဟာငါ့ရဲ့ iPhone ကိုပိတ်ထားရမယ် ...... »
ကျွန်ုပ်၏ ipad ကိုနေရာချထားရန်တောင်းဆိုသောကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ပုံကိုကူညီသည်
Hugo၊ ကျွန်ုပ်မှာထပ်တူပြproblemနာရှိတယ်၊ ကျေးဇူးပြုပြီး၊ iPhone ကိုသော့ခတ်လိုက်ရင် 'Find my iPhone' ကိုဘယ်လိုပိတ်ထားသလဲ။
ဆလိုက် update လုပ်ရန်ပြောသည့်ပြtheနာကိုဖြေရှင်းနိုင်လျှင်တစ်ယောက်ယောက်ကကျွန်ုပ်အားပြောပြနိုင်မည်
ကျေးဇူးပြု၍ တစ်ယောက်ယောက်ကိုမွမ်းမံရန်အဘယ်ကြောင့်လျှောကျ။ မရပါ
IOS9ကို ၂ ရက်လောက်ဒေါင်းလုပ်ချဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ (iTunes က (၁၄၄ နာရီကြာပြီးမကြာခင်မှာအမှားတစ်ခုရောက်သွားတယ်) မရ၊ getios (ထပ်တူထပ်တူမဟုတ်) က ipad ကငါ့ကို OTA ဒေါင်းလုပ်ချမှာမဟုတ်ဘူး။ ... နောက်ထပ်ကြီးကျယ်တဲ့ပန်းသီးတစ်လုံးကဒီမှာမရှိ။ Jobs (DEP) ပန်းသီးသည်အရည်အသွေးနှင့်အရည်အချင်းများကိုဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးပြိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ကွဲပြားနေသည်။
လုံးဝ Santi နှင့်အတူသဘောတူသည်
ကျွန်ုပ်၏ iphone5ios9ကိုမွမ်းမံပြီး၎င်းသည်အပိုင်းကိုမစလိုတော့ပါ။ သင်ကူညီနိုင်ပါသလား။
အဲလက်စ်: D ဟုသူကပြောသည်
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည် "slide to update" တွင်နေပါက iOS 8.4.1 သို့အဆင့်လျှော့ရမည်
စာမျက်နှာတစ်ခုမှ iOS 8.4.1 ဖိုင်ကို download လုပ်ပါ
Powered-on device ကို iTunes နှင့်ချိတ်ဆက်ပါ
home နှင့် power ခလုတ်နှစ်ခုလုံးကိုတစ်ပြိုင်နက် 10s မနှိပ်ဘဲ (device restart လုပ်ပါလိမ့်မည်) ထို့နောက် Apple ပေါ်လာလျှင် power ခလုတ်ကိုသာလွှတ်လိုက်ပါ iTunes သည် device ကိုမှတ်မိပြီးသင်ပြန်ယူလိုလျှင်သင့်အားမေးလိမ့်မည်။
ထိုအချိန်တွင် Windows ရှိ shift ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးပြန်ယူပါ။ ၎င်းသည်သင့်အားဖိုင်ကိုရှာဖွေရန်ပြောလိမ့်မည်။ သင်ရွေးရန်သာလိုသည်။
ဒီဟာကကျွန်တော့်ရဲ့ iPad mini2ကိုပြန်လည်ရှင်သန်စေခဲ့ပါတယ်
Adrian Ram ဟုသူကပြောသည်
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုပြန် ထား၍ ကျွန်ုပ်တွင်အရန်တစ်ခုမပါရှိပါက၊ တစ်ခုခုကိုဖျက်ပစ်ပါသလား။
Adrián Ram အားပြန်ပြောပါ
သင်ယခင်ကအကြောင်းအရာ (ဥပမာဓာတ်ပုံများ) ကိုသိမ်းဆည်းခြင်းမရှိဘဲပြန်ယူလျှင်သင်အရာအားလုံးရှုံးသည်။ သို့သော်သင် update လုပ်ရန် Swipe သို့ရောက်ရှိပါကသင်၏ device ကိုအရန်ကူးယူပြီးပြန်ယူနိုင်သည်။ နာရီအနည်းငယ်အတွင်းဖြေရှင်းချက်သည်အသစ်ပြောင်းရန်လျှောကျသွားသည်
၎င်းကိုပြန်လည်ရယူရန် iPhone5,3_8.4.1_12H321_Restore.ipsw version ကို download လုပ်ပါ။https://ipsw.me/8.4.1), ယခုတွင်ငါသည် iTunes ကိုဖွင့်သောအခါ၊ “ ဆော့ဖ်ဝဲလ်အပ်ဒိတ်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို ဆက်သွယ်၍ မရနိုင်ပါ” ဟုပြောခဲ့သည်။ (၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏အိုင်ဖုန်းကို iTunes နှင့်ချိတ်ဆက်ကြောင်းညွှန်ပြသည့်အနက်ရောင်ဖန်သားပြင်တွင်ရှိနေမည်။ သို့သော်၎င်းသည်ချိတ်ဆက်ပါကကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။ ?
ကံမကောင်းစွာပဲကျွန်ုပ်သည်ကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်၌၎င်းပြproblemနာရှိခဲ့ပြီးအင်္ဂလိပ်ဖိုရမ်များတွင်ရှာဖွေခြင်းကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့သည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အကျိုးရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်အဆင့်များကိုမျှဝေရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးပေါ် iTunes version ကို download လုပ်ရန်၊ သင် download လုပ်ထားသောဖိုင်သည်သင်၏ iPhone အတွက်မှန်ကန်မှုရှိစေရန်နှင့်နောက်တစ်ကြိမ်ကြိုးစားရန်သာအကြံပြုလိမ့်မည်။
ငါနှင့်အတူတူပါပဲ၊ ကျွန်ုပ်၏ iPod5သည် "slide to update" မှ IOS9ကို install လုပ်သောအခါမသွားပါ
ios ကိုယခင်ဗားရှင်းများသို့အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းသည်မှားသည်။ ကျွန်ုပ်ပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးပါကအားလုံးကိုသိမ်းဆည်းပြီးပြproblemနာကကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်ဖြစ်သည်။ 100
ကျွန်ုပ်တွင်ဗားရှင်း ၇ ရှိပြီး ၉ သို့ပြောင်းခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်တစ်ခုကိုရွေး။ ဆက်လက်နှိပ်ပါ။ ထို့နောက်မျက်နှာပြင်သည်“ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်” စာသားနှင့်အတူလွတ်သွားသော်လည်းကျွန်ုပ်ကိုဆက်လက်ခွင့်မပြုပါ။
ဒါကြောင့် iPhone5,3_8.4.1_12H321_Restore.ipsw ဗားရှင်းကိုပြန်လည်ရယူရန်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။https://ipsw.me/8.4.1), ယခုတွင်ငါသည် iTunes ကိုဖွင့်သောအခါ "ဆော့ဖ်ဝဲလ်အပ်ဒိတ်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို ဆက်သွယ်၍ မရနိုင်ပါ" ဟုပြောခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ iPhone ကို iTunes နှင့်ချိတ်ဆက်ကြောင်းညွှန်ပြသည့်အနက်ရောင်ဖန်သားပြင်တွင်ရှိနေမည်။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
ငါ့မှာ ipad air2(wifi) ရှိတယ်။ ဘယ် download link ကိုနှိပ်သင့်သလဲ။
နိုင်ငံပေါ် မူတည်၍ ပုံစံသည်ကွဲပြားနိုင်သည်။ Settings> General> Information သို့သွားပြီးမည်သည့်မော်ဒယ်ပေါ်လာမည်ကိုကြည့်ပါ။
မည်သည့်ဖြေရှင်းချက်မဆိုမွေ့လျော်ပါ - '(
ကျွန်ုပ်ပြန်လည် ရယူ၍ မရပါ။ ၎င်းသည်«ကျွန်ုပ်၏ iPhone ကိုရှာပါ။ ကျွန်ုပ်၏ update ကိုရယူပြီး 7.1 ရှိခဲ့သောကြောင့်ကျွန်ုပ်မပြုလုပ်နိုင်ပါက iOS 8.4.1 ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး၎င်းနှင့်သဟဇာတမဖြစ်ဟုဆိုသည်။ ?? ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ ... ?? တစ်စုံတစ်ယောက်ကူညီပေးတယ် .. ?
ကျွန်ုပ်၏ iphone အားရှာဖွေခြင်းကိုပိတ်ထားရန်တောင်းဆိုသည်၊ ဖုန်းပိတ်ထားလျှင်၎င်းကိုမပြုလုပ်နိုင်ပါ။ ယနေ့အချိန်၌မည်သူဆက်သွယ်နေခြင်းမရှိသနည်း။ !
အိုကေ၊ ငါ့ iphone 4s ကိုပြန်ထည့်လိုက်ပြီးပြproblemနာလည်းအတူတူပဲ။ ၎င်းကို DFU mode ထဲ၌ထည့်ပါ (ပါဝါခလုတ်နှင့်ပတ်ပတ်လည်ခလုတ်ကိုကြာမြင့်စွာနှိပ်ခြင်း၊ iTunes အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ကေဘယ်ကြိုးသေးသေးလေးကိုတွေ့သည်အထိမနှိပ်ပါနှင့်။ ၎င်းသည်သင် pc နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့် iphone နှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်။ ) DFU စနစ်သို့ရောက်သည်နှင့်, IOS ဗားရှင်းအဟောင်းကိုပြန်ယူပါ။ ပြီးရင် Backup ကိုပြန်ယူပါ
Cristian, မင်းရဲ့အကြံဥာဏ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ မကောင်းတာက iTunes ကကျွန်တော့်ကိုနောက်ဆုံးဆော့ဖ်ဝဲရဲ့ဗားရှင်းကိုပြန်လည်တပ်ဆင်ပြီးတပ်ဆင်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားကိုငါ့ကိုပို့လိုက်တာနဲ့ငါဒေါင်းလုပ်လုပ်လိုက်တဲ့ကိုရွေးချယ်ခွင့်မပြုဘူး။ ဒါမျိုးလား၊ မမှားလားငါမသိဘူး
ငါမွမ်းမံခြင်းမပြုမီကျွန်ုပ်၏ iphone ကိုအရန်ကူးထားခြင်း၊ ကျွန်ုပ်သည် iphone ကိုရှာဖွေခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းရန်အဘယ်ကြောင့်ပြောရကြောင်းနားမလည်ပါ၊ ကျွန်ုပ်ယခင်ကလုပ်ခဲ့ပါက၎င်းသည်အခြားအမှားတစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်သည်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျွန်ုပ်၏အိုင်ပက်ဒ်သည်ဆလိုက်အစိတ်အပိုင်းတွင်မွမ်းမံရန်ဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်ကုဒ်ကိုရိုက်ထည့်ပြီး၎င်းသည်စတင်ပါလိမ့်မည်။ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုတူညီသောအစိတ်အပိုင်းသို့ပြန်သွားပါကတစ်စုံတစ်ယောက်ကဖြေရှင်းချက်ကိုရှာတွေ့ပြီလား။ xc
ငါ့မှာ iPad UIR နဲ့ URIEL ပြproblemနာအတူတူရှိတယ်၊ ဖြေရှင်းနည်းရှိတယ်၊ ငါဘာလုပ်သင့်လဲ
တူညီသော problemaaaaaaa, pleaserrrrrrrrr သည်ဖြေရှင်းချက်သည်အသစ်ပြောင်းခြင်းကိုမပွတ်သပ်ပါ။ '(
sergio asaravicius ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏ iPhone ကို ios9သို့ update လုပ်သည့်အခါပြိုကျခဲ့သည် ("slide to update") ။ သူတို့ကဖြေရှင်းချက်က iTunes အားဖြင့်၎င်းကိုပြန်ယူရန်ဖြစ်သည်ဟုပြောခဲ့သည်။ ၎င်းကို iTunes နှင့်ချိတ်ဆက်သောအခါ၎င်းသည်သော့ခတ်ထားသောအိုင်ဖုန်းပေါ်တွင်ဖြေဆိုရန်ကျွန်ုပ်အားတောင်းဆိုသည် !!!! ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ?
sergio asaravicius ကိုပြန်ပြောပါ
Felix ဂျူနီယာ Serrano ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာနေ့လည်ခင်း၊ ကျော်ကြားသော APPLE အမှား» Slide to update »ကျွန်ုပ်သည် iOS ဗားရှင်း 8.4.1 ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြေရှင်းနည်းကိုအသုံးပြုရန်ကြိုးစားနေသည်။ သို့သော်ဖိုင်ကို download လုပ်ပြီးသောအခါ၊ decompress လုပ်တယ်။ .dmg ဖိုင်တော်တော်များများရတယ်။ ဒါပေမယ့်အဆင့် ၅ နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဖိုင်ကိုရှာတဲ့အခါ၊ iTunes လိုအပ်တဲ့ .ipsw type file ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ ငါ့ကိုမသိဘဲတောင်းပန်ပါရစေ။ လုပ်လား 🙁
Félixဂျူနီယာ Serrano အားပြန်ပြောပါ
သင့် iPhone ကို iOS9မှာ iPhone အသစ်တစ်ခုအဖြစ်ပြန်ယူနိုင်ပြီး၎င်းကိုသုံးပြီးနောက်မှအချက်အလက်များကို update လုပ်နိုင်ပါတယ်။
iPhone ကို iTunes နှင့်ချိတ်ဆက်ပါ။
OFF ခလုတ်နှင့် HOME ခလုတ်နှစ်ခုလုံးကိုတစ်ပြိုင်တည်း နှိပ်၍ iphone ကိုပြန်လည်စတင်ရန်သူတို့ကိုဖိထားပါ။
ပန်းသီးပေါ်လာတဲ့အခါ OFF ခလုတ်ကိုလွှတ်လိုက်ပါ။
အသစ်ပြောင်းရန်ရွေးစရာပေါ်လာလိမ့်မည်။ စက်ရုံဆက်တင်များသို့ပြန်သွားရန် SHIFT ကိုနှိပ်ပါ။
အကယ်၍ iTunes သည်သင့်ကိုယခင်ဗားရှင်းသို့ပြန်ပို့ခွင့်မပြုပါကလက်ခံပါ ၉ နှင့်လက်ခံပါ။
ဆော့ဖ်ဝဲကို iTunes မှအသစ်ပြောင်းပြီးဖတ်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်မိတ္တူကူးခြင်းသို့မဟုတ် iPhone အသစ်အရပြန်လည်စတင်မျက်နှာပြင်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ NEW IPHONE ရွေးစရာကိုရွေးချယ်ပါ။
ဤအချက် မှနေ၍၊ မည်သည့်အရန်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်မွမ်းမံခြင်းမရှိဘဲဖုန်းကိုတိုက်ရိုက်ချိန်ညှိချက်များပြုလုပ်သည်။
Hugo ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်ပေးတဲ့ဖြေရှင်းချက်ကိုစမ်းသပ်နေပါတယ်၊ ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်နေလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်
ဒါကငါ့အတွက်အလုပ်မလုပ်ဘူး၊ အမှားတစ်ခုလုပ်မိတယ် (14)
ငါအကြိမ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားခဲ့ပြီး hugo ကိုထုတ်ဝေလိုက်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ iphone ကိုထပ်မံအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်ကအကြိမ်များစွာကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းအမှားတစ်ခုဖြစ်ပြီးအလုပ်မလုပ်မှီအထိဖြစ်တယ်၊ ဒါကြောင့် iPhone ဟာဗားရှင်း ၉ မှာအသစ်အဆန်းဖြစ်ခဲ့ရင် iTunes မှာ backup ကိုအရန်ကူးထားဖို့ကြိုးစားပေမယ့်ကျွန်တော်အလုပ်မလုပ်ခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်အနည်းဆုံးငါဖုန်းပြီးသွားပြီ၊ အဲဒါကငါ့အတွက်အရေးကြီးတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် hugo !!
မင်္ဂလာပါသူငယ်ချင်းများ၊ ကျွန်ုပ်ပြproblemနာကိုအဆင့်လျှော့ချခြင်းဖြင့်ဖြေရှင်းခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ၈.၄ ကိုလျှော့ချခဲ့သည်။ ရှင်းပြလိုသောအကူအညီများလိုအပ်ပါကဤသို့ပြုလုပ်လိုသူများသည်ကျွန်ုပ်အားအီးမေးလ်ပို့နိုင်သည်။ ဒီမှာကျွန်တော့်လိပ်စာပါ valguardiac@gmail.com
ငါဖုန်းကိုထပ်သုံးလို့ရတယ်။ အကယ်၍ သင့်တွင် iclloud ၌ backup ရှိပါက Apple သည် update ကိုအမှားများပြင်နေစဉ်သင်၏အချက်အလက်များကိုထိုနေရာမှရယူနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ backup ကို iTunes မှမတင်နိုင်ပါ။ ငါတို့စောင့်လိမ့်မယ်
hack က ဟုသူကပြောသည်
IOS5အတွက် iphone9အတုကိုသုံးလို့ရမလား။
iOS9Content Blockers အတွက်ထောက်ပံ့သောကိရိယာများ
Apple က iTunes 12.3 ကို iOS9နဲ့တွဲဖက်အသုံးပြုထားသည်